Ny fiavian'ny Tompo - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-02 > Ny fiavian'ny Tompo
Inona araka ny heverinao no mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga amin'ny sehatra izao tontolo izao? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Angamba ny fifandraisana amin'ny extraterrestrial intelligence? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra izay hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany.
Ny hafatra afovoan'ny Baiboly
Ny tantaran’ny Baiboly manontolo ao amin’ny Testamenta Taloha dia mifantoka amin’ny fiavian’i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy Mpanjaka. Araka ny voalaza ao amin’ny Genesisy 1, ny ray aman-drenintsika voalohany dia nanapaka ny fifandraisany tamin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahotana. Na izany aza, Andriamanitra dia nanambara mialoha ny fiavian’ny Mpamonjy iray mba hanasitrana an’io fahasimbana ara-panahy io. Hoy Andriamanitra momba ilay menarana nitarika an’i Adama sy Eva hanota: “Ary hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany; hanorotoro ny lohanao izy, fa ianao kosa hanindrona ny ombelahin-tongony » (Genesisy 3,15). Io no faminaniana voalohany indrindra ao amin’ny Baiboly momba ny Mpamonjy izay handresy ny herin’ny ota izay entin’ny ota sy ny fahafatesana eo amin’ny olombelona. "Tokony hanorotoro ny lohanao izy". Ahoana no tokony hanaovana izany? Tamin’ny alalan’ny soron’i Jesosy Mpamonjy: “Hatsindrona amin’ny ombelahin-tongony Izy”. Tanteraka io faminaniana io tamin’ny fotoana voalohany nahatongavany. Nahafantatra azy ho “Zanak’ondrin’Andriamanitra izay mitondra ny fahotan’izao tontolo izao” i Jaona Mpanao Batisa 1,29). Asehon'ny Baiboly ny maha zava-dehibe ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany ary i Jesoa izao dia miditra amin'ny fiainan'ny mpino. Nilaza tamim-pahatokiana koa izy fa ho avy indray i Jesosy, hita maso sy amin-kery lehibe. Eny tokoa, fomba telo no nahatongavan’i Jesosy:
Jesosy dia efa tonga
Isika olombelona dia mila ny fanavotana avy amin'Andriamanitra - ny famonjeny - satria isika rehetra dia efa nanota ka nitondra fahafatesana ho amin'izao tontolo izao. Nataon’i Jesosy ho tanteraka izany famonjena izany tamin’ny nahafatesany hisolo antsika. Nanoratra toy izao i Paoly: “Fa sitrak’Andriamanitra ny hitoeran’ny be rehetra ao aminy, ary Izy no nampihavanany ny zavatra rehetra taminy, na etỳ an-tany, na any an-danitra, ka manao fihavanana amin’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana” (Kolosiana). 1,19-20). Nositranin’i Jesosy ilay fahavakisana nitranga tao amin’ny saha Edena. Amin’ny alalan’ny sorona nataony, dia mihavana amin’Andriamanitra ny fianakavian’olombelona.
Ny faminanian’ny Testamenta Taloha dia niresaka momba ny fanjakan’Andriamanitra. Ny Testamenta Vaovao dia manomboka amin’ny fitorian’i Jesosy “ny vaovao tsaran’Andriamanitra”: “Efa tonga ny fotoana, ka tonga ny fanjakan’Andriamanitra”, hoy izy (Marka. 1,14-15). Jesosy, ilay Mpanjakan’io fanjakana io, dia nandeha teo anivon’ny vahoaka ary nanolotra “sorona tokana mandrakizay noho ny fahotan’ny ota” (Hebreo). 10,12 Fandikan-teny Genève Vaovao). Tsy tokony hatao ambanin-javatra mihitsy ny maha-zava-dehibe ny fahatongavana ho nofo, ny fiainana ary ny fanompoan’i Jesosy 2000 taona lasa izay.
Ho avy i Jesosy izao
Misy vaovao mahafaly ho an’izay mino an’i Kristy: “Hianareo koa dia efa maty tamin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nivelomanareo fahiny araka ny fanaon’izao tontolo izao ... izay nitiavany antsika, anisan'izany isika izay efa maty tamin'ny ota, ary niara-belona tamin'i Kristy - fahasoavana no namonjena anareo » (Efesiana). 2,1-2; 4-5).
"Andriamanitra nanangana antsika hiaraka amintsika ka nanangana antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny fahasoavany amin'ny fahasoavana ho antsika ao amin'i Kristy Jesosy" (andininy 6-7). Ity fizarana ity dia mamaritra ny toetrantsika ankehitriny amin'ny maha mpanara-dia an'i Jesosy Kristy antsika!
Rehefa nanontany ny Fariseo hoe rahoviana no ho tonga ny fanjakan’Andriamanitra, dia hoy i Jesosy: “Ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy tonga mba ho hita maso; ary tsy hisy hanao hoe: Indro, indro! na: misy io! Fa, indro, ny fanjakan’Andriamanitra dia eo aminareo” (Lioka 17,20-21). Jesosy Kristy no nitondra ny fanjakan’Andriamanitra tao amin’ny tenany. Jesosy dia miaina ao anatintsika ankehitriny (Galatiana 2,20). Amin’ny alalan’i Jesosy ao anatintsika no ampitomboiny ny herin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ny fiaviany sy ny fiainany ao anatintsika dia maneho mialoha ny fanambarana farany ny fanjakan’Andriamanitra eto an-tany amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany.
Nahoana i Jesosy no velona ao anatintsika ankehitriny? Hoy isika: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy » (Efesiana). 2,8-10). Namonjy antsika tamin’ny alalan’ny fahasoavana Andriamanitra, fa tsy tamin’ny ezaka ataontsika. Na dia tsy afaka mahazo famonjena amin’ny alalan’ny asa aza isika, Jesosy dia mitoetra ao anatintsika mba hahafahantsika manao asa tsara sy manome voninahitra an’Andriamanitra.
Ho avy indray i Jesosy
Taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, rehefa hitan’ireo zanany niakatra izy, dia nisy anjely roa nanontany azy ireo hoe: “Inona no ijoroanareo eto mijery ny lanitra? Io Jesosy io, Izay nakarina niala taminareo ho any an-danitra, dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra » (Asan’ny Apostoly 1,11). Eny, ho avy indray Jesosy.
Tamin’ny fiaviany voalohany, dia namela faminaniana momba ny Mesia tsy tanteraka i Jesosy. Izany no iray amin’ireo antony nandavan’ny Jiosy maro azy. Nanantena izy ireo fa ho mahery fo ho an’ny firenena ny Mesia izay hanafaka azy ireo amin’ny fitondran’ny Romanina. Tsy maintsy tonga aloha anefa ny Mesia mba ho faty ho an’ny olombelona rehetra. Taty aoriana vao hiverina ho mpanjaka mpandresy izy ary tsy hanandratra ny Isiraely fotsiny, fa hametraka ny fanjakany mandrakizay amin’ny fanjakana rehetra amin’izao tontolo izao. “Efa tonga ny fanjakana amin’izao tontolo izao, dia ny Tompontsika sy ny Kristiny, ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay.” (Apokalypsy 11,15).
Hoy i Jesosy: “Ary rehefa handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako hianareo” (Jaona 1.4,3). Tatỳ aoriana, ny apostoly Paoly dia nanoratra toy izao ho an’ny kongregasiona: “Ny tenan’ny Tompo no hidina avy any an-danitra, rehefa notsofina ny didy, rehefa re ny feon’ny arikanjely sy ny trompetran’Andriamanitra.” ( 1 Tes. 4,16). Amin’ny fiavian’i Jesosy fanindroany, dia hatsangana ho amin’ny tsy fahafatesana ny olo-marina efa maty, izany hoe ny mino izay nankinina tamin’i Jesosy, ary ny mino izay mbola velona amin’ny fiverenan’i Jesosy dia hovana ho tsy fahafatesana. Ny rehetra dia handeha hitsena azy eny amin’ny rahona (and. 16-17; 1. Korintiana 15,51-54).
Nandritra ny taonjato maro, ny fifandinihana momba ny fiavian'i Kristy fanindroany dia niteraka adihevitra isan-karazany - sy ny fahadisoam-panisana tsy tambo isaina, satria ny fisehoan-javatra samihafa nataon'ireo prekaso dia nanaporofo fa diso. Ny overemphasis be loatra amin'ny "Rehefa hiverina i Jesosy" dia mety hanelingelina antsika tsy hifantoka amin'ny ivon'ny afovoan'ny filazantsara. Ity no asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olombelona rehetra, tanteraka amin'ny fiainany, ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fandrotsahany ny fahasoavana, ny fitiavana ary ny famelan-keloka ho Mpisoronabe any an-danitra. Afaka manombatombana lalina amin'ny faminaniana ara-paminaniana isika ka tsy mahavita ny andraikitra ara-drarin'ny Kristiana amin'ny maha-vavolombelona an'izao tontolo izao. Tokony haneho ohatra amin'ny fomba fiainana feno fitiavana sy famindram-po ary an'i Jesosy isika ary mitory ny vaovao mahafaly.
Tsy azo fantarina hoe rahoviana no ho avy i Kristy ka tsy manan-danja raha oharina amin’izay lazain’ny Baiboly. Inona no tokony hifantohantsika? Ny tsara indrindra dia ny miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy isaky ny mitranga izany! “Izany no mahatonga anareo koa miomana mandrakariva”, hoy i Jesosy, “fa ho avy ny Zanak’olona amin’ny andro tsy ampoizinareo”. (Matio 24,44 Fandikan-teny Genève Vaovao). “Fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena”. (Matio 24,13 Fandikan-teny Genève Vaovao). I Jesosy Kristy foana no ifantohan’ny Baiboly. Noho izany, ny fiainantsika amin’ny maha-mpanara-dia an’i Kristy antsika dia tokony hihodidina Azy. Tonga teto an-tany i Jesosy tamin’ny naha-olombelona sy Andriamanitra. Tonga amintsika mpino Izy ankehitriny amin’ny alalan’ny fonenan’ny Fanahy Masina. Ho avy indray amin’ny voninahitra i Jesoa Kristy “mba hanova ny tenantsika foana ho tahaka ny vatany be voninahitra” (Filipiana). 3,21). Amin’izay dia “ny zavaboary koa dia ho afaka amin’ny fanandevozan’ny tsi-fahatanterahana ho amin’ny fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra.” ( Romana 8,21). Eny, ho avy faingana aho, hoy ny Mpamonjy antsika. Amin’ny maha-mpianatr’i Kristy antsika rehetra dia mamaly amin’ny feo iray ihany isika hoe: “Amena, eny, avia, Jesosy Tompo ô!” (Apokalypsy 22,20).
nosoratan'i Norman L. Shoaf